Global Voices teny Malagasy » Fanatsofohana Bitsika Eo Amin’ny GV: Lahatsary Fampianarana Sy Taridàlana Manaraka Ny Zavamisy Mba Tsy Hampalahelo An’ireo Mpandika Lahatsoratra! · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 03 Avrily 2019 8:41 GMT 1	 · Mpanoratra Jer Clarke Nandika Sylvia Aimée
Sokajy: Dika, Mediam-bahoaka, Blaogim-Piarahamonina GV, efitrano famoahambaovao, Fomba fanoratra, gv-torolàlana
Salama daholo, nisy fisavoritahana kely mikasika ny fomba fanatsofohantsika bitsika ao anatin'ireo lahatsoratra WordPress an'ny GV, ary mba hanazavana an'izay rehetra izay, navaoziko ireo taridàlana ofisialy momba ny famoahana ny Twitter ao amin'ny WordPress  ary narafitro ny lahatsary fampianarana  teo amin'ny kaonty YouTube-n'ny Taridàlana GV antsika!
Jereo ny lahatsary dia afaka mandingana ny ambin'ity lahatsoratra ity ianao
Ity ny lahatsoratra mikasika ny taridàlana nohavaozina  avy amin'ny Torolalana Famoahana Lahatsoratra WordPress :
Ny lamina ofisialy an'ny GV amin'ny fanatsofohana bitsika ho ao anaty WordPress dia mampiasa ny “Embed HTML” avy amin'ny Twitter:
Find the tweet on Twitter.com …………Tadiavo eo amin'ny Twitter.com ilay bitsika
Mandehana eo ambonin'ilay bitsika ary tsindrio ny bokotra “•••more”.
Safidio ny “Embed” ary adikao ny Embed HTML izay mipoitra eo.
Ao anatin'ny fàfana fikirakiràna WordPress, tsindrio eo amin'ny “Text” ary tadiavo ny toerana toerana tokony hisy ilay bitsika ao anatin'ilay HTML.
Araiketo ao anatin'ny HTML avy amin'ny Twitter.
Toy izao no vokatr'ity dingana ity
<blockquote class="twitter-tweet"> miaraka amin'ny bitsika manontolo ary koa ireo rohy, credit ary timestamp.
Amin'ny alalan'ny fandikana mivantana ny kaody fanatsofoka, mahazo dika feno mitovy amin'ilay bitsika isika ao anaty lahatsoratsika. Rehefa ho vakian'ireo mpamaky ny lahatsoratra, ho tsaratsara endrika kokoa no fahitàna azy, miaraka amin'ireo sary, ireo bokotra, sy ny sisa… saingy hita ao ambadik'io ny fandraiketana manontolo ilay bitsika izay ho eo foana, na nesorina aza ilay bitsika, na raha toa ka nesorina tsy ho an-tambajotra mihitsy ny Twitter.
Tokoa tokoa, ny tena zavadehibe dia ity naoty fanarahamaso ity (tahaka izay hazavaina ao anatin'ny lahatsary):
Fanamarihana: Aza atsofoka avy hatrany ny rohy an'ilay bitsika!
Fomba iray fanatsofohana bitsika avy amin'ny twitter ny fandikana ny rohy sy ny fampiraiketana azy mivantana ao anaty lahatsoratra, izay hita marina ho tsotra sy mampilamina. Ny olana dia izao: ny fanatsofohana ampiasàna io fomba io dia midika fa tsy ao anaty lahatsoratsika ilay bitsika tena izy, ary raha vao novonoina ilay bitsika, dia ny rohy fotsiny no ho asehon'ny lahatsoratra, izay mitarika ny hadisoana 404 raha vao tsindrinao eo amboniny!
Ho an'ny tanjon'ny GV, tsy marimaritra iraisana mahaliana izy. Vokatr'izay, mba tsy hampidirana mivantana an'ireo rohy, ampiasaintsika foana ny fomba voalaza eo ambony mba hahazoana ny kaody miaraka aminy <blockquote class=”twitter-tweet”>.
Noho izany, aza mametraka an'ireo rohin'ilay bitsika fotsiny ao anatin'ireo lahatsoratra, satria tsy ho azo antoka ny hoavin'io ary asongadin'io ireo mpandika lahatsoratry ny Lingua izay lasa manao ny asa amin'ny toeranao (ary im-betsaka, satria voan'ny manao izany isaky ny lahatsoratra ry zareo).
Misaotra amin'ny fanampiana sy ny faharetana!
Amin'ny manaraka, iriko ny hitondra lahatsary taridàlana vaovao ho anareo! Ampahafantaro ahy izay tianareo hatao ao anatin'ny lahatsary fampianarana voalohany!
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2019/04/03/136520/
 taridàlana ofisialy momba ny famoahana ny Twitter ao amin'ny WordPress: https://community.globalvoices.org/guide/technical-guides/gv-posting-guide/#Twitter
 lahatsary fampianarana: https://www.youtube.com/watch?v=A7XWkPmmhzA&feature=youtu.be
 YouTube-n'ny Taridàlana GV : https://www.youtube.com/channel/UCWNPGGx18zPt-x5cX8OU8aQ